ဉာဏ်ကောင်းတဲ့ဆေး မကြာခဏ မေးကြတယ်။ ဆေးရယ်လို့မရှိပါကြောင်း ဖြေရတယ်။
လူကောင်းတယောက်ဟာ ခပ်ပေါပေါဖြစ်ချင်ဖြစ်နေပေမယ့် သူဟာလူကောင်းပဲ။ ဆိုးတဲ့သူမှာ ဦးနှောက် (အကြံတွေ) ရှိလိမ့်မယ်။ (မက်ဇင် ဂေါ်ကီ)
A good man can be stupid and still be good. Butabad man must have brains. (Maxim Gorky)
ကောင်းတဲ့ဉာဏ်ကို ကောင်းတဲ့နေရာမှာ အသုံးချသူဖြစ်မှသာ လူကောင်းဖြစ်ပါတယ်။